ပရိတ်သတ် ကြီး အံ့သြသွား စေမယ့် အမိုက် စား ကောက်ကြောင်းလေးပေါ်အောင် အကလေးနဲ့ ဂေါ်ပြလိုက်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး – Online News Post
ပရိတ်သတ် ကြီး အံ့သြသွား စေမယ့် အမိုက် စား ကောက်ကြောင်းလေးပေါ်အောင် အကလေးနဲ့ ဂေါ်ပြလိုက်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ယ ခု မှာ ဆိုရင် လည်း သံသာမိုးသိမ့် က ” သူများတွေ ကရင်လှလှလေး ဆရာမ ကတော့ ခုန်ပါပေါက်သွား သေးတယ် “ ဆိုတဲ့ စာသား လေး နဲ့ အ တူ နိုင်ငံ ခြား သီချင်း လေး နဲ့ အတူ ဆော့ကစား ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို လေးကို ဝေမျှ လာခဲ့ တာပါ ။ ကြည့်မိ သူတွေ အသည်း ယားစေ လောက် တဲ့ အဆိုပါ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို တင် ဆက် ပေး လိုက် ပါ တယ် ။ မင်း သမီး ချောလေး သံသာမိုးသိမ့် ကတော့ MRTV –4ဇာတ် လမ်း တွဲတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် လျက်ရှိ နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး ပရိ သတ် တွေရဲ့ ရင်ထဲ မှာ နေရာ တစ် ခု ကို ရ ယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
အနု ပညာ လော က မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထား နိုင်ခဲ့ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ကြော်ငြာတွေ ကိုလည်း ရိုက် ကူး လျက် ရှိနေ တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ကို ပါ အခိုင် အမာ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ချစ်စရာ ပုံစံလေး နဲ့ လှပနေ တဲ့ ပုံရိ လး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေးလေ့ ရှိသူ တစ် ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အသည်းယား စရာ အမူအရာ လေးနဲ့ အ ပီအ ပြင် ဆော့ကစား ထားတဲ့ Tik Tok လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာ မျက်နှာ ထက် တင်ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ် … .
source : Than Thar Moe Theint ’ s facebook account
ယ ခု မွာ ဆိုရင္ လည္း သံသာမိုးသိမ့္ က ” သူမ်ားေတြ ကရင္လွလွေလး ဆရာမ ကေတာ့ ခုန္ပါေပါက္သြား ေသးတယ္ “ ဆိုတဲ့ စာသား ေလး နဲ႔ အ တူ နိုင္ငံ ျခား သီခ်င္း ေလး နဲ႔ အတူ ေဆာ့ကစား ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို ေလးကို ေဝမၽွ လာခဲ့ တာပါ ။ ၾကည့္မိ သူေတြ အသည္း ယားေစ ေလာက္ တဲ့ အဆိုပါ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး ကို တင္ ဆက္ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ ။ မင္း သမီး ေခ်ာေလး သံသာမိုးသိမ့္ ကေတာ့ MRTV –4ဇာတ္ လမ္း တြဲေတြမွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိ ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး ပရိ သတ္ ေတြရဲ့ ရင္ထဲ မွာ ေနရာ တစ္ ခု ကို ရ ယူထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
အႏု ပညာ ေလာ က မွာ ေနရာ တစ္ခုကို ရယူထား နိုင္ခဲ့ၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အျပဳံးေလးေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြ ကိုလည္း ရိုက္ ကူး လ်က္ ရွိေန တဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ မိန္းကေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပး မႈ ေရာ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပး မႈ ကို ပါ အခိုင္ အမာ ရယူ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ ခ်စ္စရာ ပုံစံေလး နဲ႔ လွပေန တဲ့ ပုံရိ လး ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပးေလ့ ရွိသူ တစ္ ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အသည္းယား စရာ အမူအရာ ေလးနဲ႔ အ ပီအ ျပင္ ေဆာ့ကစား ထားတဲ့ Tik Tok ေလးေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာ မ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပး ေလ့ ရွိ ပါ တယ္ … .
Previous post ဖြူနု ဝင်းမွတ် နေ တဲ့ အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား မြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှား ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
Next post ကြည့်ရှု သူတွေ ကို ရင်ခုန် အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ရွှေရင်အစုံ လေးတွေပေါ်လွင် နေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယိုလေး